Sawirro: Muxuu Kheyre ka doonay xerada Balidoogle? - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Muxuu Kheyre ka doonay xerada Balidoogle?
Sawirro: Muxuu Kheyre ka doonay xerada Balidoogle?
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’isul wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, ayaa maanta booqasho kedis ah ku tagay Xarunta tababarka Ciidanka Xoogga Dalka, gaar ahaan ciidamadda sida gaarka ah u tababaran ee ‘’Danab’’ ee deegaanka Balli-doogle.
Ra’isul wasaare Kheyre ayaa goortii uu gaaray Xarunta gacanta mariyay Saraakiisha iyo Ciidamada ku sugnaa xarunta, gaar ahaan kuwa dhawaan loo furay tababarada.
Ra’isul wasaare Kheyre, waxaa booqshadiisa ku wehlinaayay Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya iyo qaar ka mid ah Saraakiisha ciidanka Xoogga Dalka.
Intaa kadib Kheyre ayaa warbixino ka dhageystay Saraakiisha ciidamada ee ku sugan Xerada Balli-doogle ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Kheyre ayaa waxa uu xariga ka jaray qayb cusub oo lagu soo kordhiyay xarunta tababarka, waxa uuna sheegay in booqashadiisa ay qeyb ka aheyd sidii uu u ogaan lahaa horumarka ay sameeyeen sannadkii lasoo dhaafay Ciidanka Danab ee ku sugan halkaas.